Unyango lwe-D-Ribose ye-fibromyalgia, ME kunye nesifo sokudinwa okungapheliyo
07 / 08 / 2013 /1 Comment/i supplements, Ukudinwa kunye nokudinwa/av ubuhlungu
I-Fibromyalgia kunye nesifo esingapheliyo sokukhathala (esibizwa ngokuba yi-ME) zi-syndromes eziphazamisayo ezihlala zidibaniswa nokuhla kwe-cellular metabolism-kubangelwa amandla angaphantsi kweselula. Yintoni kanye kanye i-D-ribose, uthi? Ngaphandle kokuntywila nzulu kwihlabathi leekhemikhali, kukho nje into ephilayo, eyimichiza (iswekile yesomerom) ebaluleke kakhulu kumandla eselfowuni afanelekileyo kuzo zombini i-DNA kunye neRNA. Uphando lupapashwe kwijenali yezonyango I-Journal ye-Alternative and Complementary Medicine ibonakalisile ukuba i-D-ribose inokunceda ekuboneleleni isiqabu kubantu abaphethwe yi-fibromyalgia kunye ne-ME / isifo sokudinwa okungapheliyo.
Funda: Iimpawu ezi-7 zokuqala zeFibromyalgia
- Ufuna ukwabelana ngeli nqaku nabahlobo abathetha isiNgesi? Nantsi translation.
Ingcaciso ye-DNA: I-acid ye-nucleic ephethe ulwazi ngemfuza kwiseli kwaye iyakwazi ukuziphindaphinda kunye nokudibanisa i-RNA (jonga ngezantsi). I-DNA inamatyathanga amabini amade ee-nucleotides aguqukele kwi-helix ephindwe kabini kunye kunye ne-hydrogen bond phakathi kweziseko ezihambelana ne-adenine kunye ne-thymine okanye i-cytosine kunye ne-guanine. Olu luhlu lwee-nucleotides luchaza iimpawu zelifa lomntu ngamnye.
Ingcaciso ye-RNA: Icandelo le polymeric yazo zonke iiseli eziphilayo kunye neentsholongwane ezininzi ezibandakanya ixesha elide, elihlala linamakhonkco atshintshisanayo kunye nezinto zerhasi ezinesiseko se-adenine, i-guanine, i-cytosine, i-uracil kwaye ibotshelelwa kwimbambo. Iimolekyuli ze-RNA zibandakanyeka ekuqulunqweni kweprotheni kwaye ngamanye amaxesha ekuhanjisweni kolwazi lwemfuzo. Ikwabizwa ngokuba yi-ribonucleic acid.
Uphando kunyango lwe-D-Ribose lwe-fibromyalgia, ME kunye nesifo sokudinwa okungapheliyo:
D-Ribose. Ifoto: iWikimedia Commons
Kwisifundo somqhubi wenqwelo moya nguTitelbaum (2006), Abaguli abangama-41 bafunyaniswa ukuba banesifo i-fibromyalgia kunye / okanye isifo sokudinwa okungapheliyo banikwa ukongezwa kwe-D-ribose. Izigulana zilinganisa inkqubela yazo ngokwamanqanaba aliqela; ukulala, ukubakho kwengqondo, iintlungu, ukuhlala kakuhle kunye nokuphuculwa ngokubanzi. Ngaphezulu kwe-65% yezigulana eziye zaphuculwa kakhulu kwi-D-ribose, malunga neepesenti eziphantse zibe ngama-50% kumgangatho wamandla oxeliweyo kunye nemvakalelo yokuphila kakuhle okuye yaphuculwa ngama-30%.
"Phantse i-66% yezigulana zifumene ukuphucuka okubonakalayo ngelixa zikwi-D-ribose, ngokunyuka okuphakathi kwamandla kwi-VAS ye-45% kunye nokuphuculwa komndilili kwimpilo-ntle ye-30% (p <0.0001)."
izifundo wagqiba kwelokuba i-D-ribose yayinegalelo eliphambili leklinikhi kwimpawu zokukhululeka kwesifo kwizifo ze-fibromyalgia kunye ne-ME:
"I-D-ribose inciphise kakhulu iimpawu zeklinikhi kwizigulana ezinesifo se-fibromyalgia kunye nesifo esingakhathali esinganyangekiyo."
Izifundo ezininzi zixhasa ukuba i-D-ribose inokuba nesiphumo
Olunye uphando (2004) wafumanisa ukuba abathathi-nxaxheba kwisifundo banamava ophuculo oluphawulweyo ngendlela yentlungu encinci ye-fibromyalgia kunye neempawu. Abathathi-nxaxheba batya iigrama ezi-5 ze-D-ribose kabini ngemini. Ngelishwa, uphononongo lukwabonise ukuba umntu kufuneka aqhubeke nokuyithatha ukuze abe nesiphumo esihlala sihleli- kuba kwavela ukuba iintlungu kunye neempawu zabuya emva kweveki emva kokuba beyekile ukuthatha i-d-ribose.
Funda: - Amanyathelo okuNceda iNhlungu ngeNdalo kwiFibromyalgia
Umanyano kwabo banengxaki yokuphazamiseka kunye nesifo esinganyangekiyo esingapheliyo
Sikwacebisa wonke umntu ukuba ajoyine iqela le-FB «I-Rheumatism kunye neNhlungu eziNgapheliyo - INorway: uPhando kunye neNdaba»(Ivula kwiwindow entsha). Apha unokufumana ingcebiso elungileyo, uhlaziyo lolwazi kunye noncedo oluncedo kubantu abathanda izinto-kunye nokuhlala unolwazi malunga nokwenzekayo kunyango kunye nophando lwangaphambili ngokubhekisele koku kufunyaniswa.
IPHEPHA ELANDELAYO: Ngaba Unyango loNyango oluPhezulu lweXinzelelo sisisombululo sakho kubuhlungu obungapheliyo?
Ndingenza ntoni ngokuchasene nentlungu kwimisipha, kwimisipha kunye namalungu?
1. Ukuzivocavoca okuqhelekileyo, ukwenza umthambo ngokuthe ngqo, ukolula kunye nomsebenzi kuyacetyiswa, kodwa hlala ngaphakathi komda weentlungu. Ukuhamba kabini ngemizuzu engama-20 ukuya kwengama-40 ukwenza umzimba uphela kakuhle kunye nemisipha ebuhlungu.
2. Inqaku lokuqalisa / Iibhola zokuthambisa sicebisa ngamandla-eza ngobukhulu obahlukeneyo ukuze ube nokubetha kakuhle kuwo onke amalungu omzimba. Alukho uncedo olungcono lokuzonwabisa olungcono kunolu! Sicebisa oku kulandelayo (cofa umfanekiso apha ngezantsi) - oku kusetiweyo kwee-5 trigger point / iibhola zokulinganisa ngokobukhulu obahlukeneyo:
3. uqeqesho: Uqeqesho oluthile ngamaqhinga oqeqesho lwabachasi abahlukeneyo (njenge le seti epheleleyo yee-knits ezi-6 zokuchasana okwahlukileyo) inokukunceda uqeqeshe amandla kunye nokusebenza. Uqeqesho lwe-Knit luhlala lubandakanya uqeqesho oluthe kratya, oluya kukhokelela ekuthinteleni ukwenzakala okusebenzayo kunye nokuncitshiswa kwentlungu.
4. Ukuncedwa kwentlungu- Ukupholisa: I-Biofreeze yimveliso yendalo enokuphelisa iintlungu ngokupholisa indawo ngobunono. Ukupholisa kunconyelwa ngokukodwa xa iintlungu zinzima. Xa behlise umoya, ke kunconywa ubushushu - oko ke kuyacetyiswa ukuba ukubanda kuphinde kubekhona.
5. Ukukhululeka kubuhlungu - Ukufudumeza: Ukufudumeza izihlunu eziqinileyo kunokunyusa ukuhamba kwegazi kunye nokunciphisa iintlungu. Sincoma oku kulandelayo gasket eshushu / ebandayo (Cofa apha ukuze ufunde okungakumbi ngayo) - enokusetyenziselwa ukupholisa (inokumiswa ngumkhenkce) kunye nokufudumeza (kungafudunyezwa kwimicrowave).
6. Uthintelo kunye nokuphilisa: Uxinzelelo yingxolo enjalo ngoluhlobo inokunyusa ukuhamba kwegazi kwindawo echaphazelekayo, oko kukhawulezisa ukunyanga kwendalo kwezihlunu ezonzakeleyo okanye ezinxibileyo kunye nemisipha.
I-Teitelbaum JE, UJohnson C, Ist. J. Ukusetyenziswa kwe-D-ribose kwisifo sokudinwa okungapheliyo kunye ne-fibromyalgia: isifundo somqhubi. J Altern Complement Med. 2006 Nov;12(9):857-62.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 0 0 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2013-08-07 08:21:372020-01-21 15:17:52Unyango lwe-D-Ribose ye-fibromyalgia, ME kunye nesifo sokudinwa okungapheliyo
Ndine-ME kunye ne-fibromyalgia, ngelishwa ndaziva ndinesiphumo sokuvavanya i-d-ribose, kodwa ezinye izinto zindincedile.
I-Turmeric kunye neepropathi zayo zezempilo ezifanelekileyo Uxinzelelo loqhekeko olunyaweni